साथीहरूसँग घडी 59
यो कसरी हो कि समस्याहरु जो सबै प्रयासहरु चकित छ र समाधान को असंभव देखिन्छ लगन को समयमा घंटों को हल को हल गर्न को लागी या तुरुन्त जागने को लागी?
एक समस्या समाधान गर्न, दिमाग को विचार कक्षहरु अब्स्ट्रक्ट हुनु पर्छ। जब त्यहाँ दिमागको चिन्तन कक्षहरुमा गडबडी वा अवरोधहरू छन्, विचार अन्तर्गतको कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया बाधा वा बन्द छ। गडबडी र अवरोधहरू हराउने बित्तिकै, समस्या समाधान हुन्छ।
दिमाग र दिमाग एक समस्या बाहिर काम गर्न कारकहरू हुन्, र काम एक मानसिक प्रक्रिया हो। समस्या शारीरिक समस्याको साथ चिन्तित हुन सक्दछ, किनकि कुन पुल निर्माण गर्ने र कुन पनी निर्माणको विधि पूल निर्माण गर्दा अनुसरण गर्न सकिन्छ ताकि यसमा कम वजन र ठूलो शक्ति हुन सक्दछ; वा समस्या अमूर्त विषयको हुन सक्छ, जस्तै, कसरी सोचाई छुट्याइएको छ र ज्ञानसँग कसरी सम्बन्धित छ?
शारीरिक समस्या दिमाग द्वारा काम गरीन्छ; तर साइज, र ,्ग, तौललाई ध्यानमा राख्दै इन्द्रियलाई खेलमा बोलाउँदछ र दिमागलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। समस्याको समाधान वा समस्याको एक हिस्सा जुन शारीरिक होइन यो एक मानसिक प्रक्रिया हो जसमा इन्द्रिय चिन्तित हुँदैन र जहाँ इन्द्रियको कार्यले हस्तक्षेप गर्दछ वा दिमागलाई समस्या समाधान गर्नबाट रोक्छ। दिमाग दिमाग र इन्द्रियको मिल्दो ठाउँ हो, र शारीरिक वा संवेदनशील नतिजा सम्बन्धी समस्याहरूमा दिमाग र इन्द्रियहरूले दिमागमा सँगै काम गर्दछन्। तर जब अमूर्त विषयहरूको समस्याहरूमा दिमाग काम गर्दछ, इन्द्रियहरू चिन्तित हुँदैनन्; यद्यपि बाहिरी संसारका वस्तुहरू इन्द्रियको माध्यमबाट दिमागको चिन्तन कक्षमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् र दिमागलाई यसको काममा अवरोध वा अवरोध खडा गर्दछ। जतिसक्दो चाँडो दिमागले समस्याहरुमा विचार पुर्‍याउन यसका फ्याकल्टीहरु लाई ल्याउन सक्दछ, बाह्य गडबडी वा चिन्ता नगरिएका विचारहरु दिमागको चिन्तन कक्षबाट बाहिर राखिन्छन्, र समस्याको समाधान एक पटक देख्न सकिन्छ।
जाग्ने घण्टामा इन्द्रियहरू खुला हुन्छन्, र बाहिरका विश्वबाट अप्रासंगिक दृश्यहरू र ध्वनिहरू र छापहरू दिमागमा चिन्ता कक्षमा तुरुन्तै हतार गर्दछन् र दिमागको कार्यमा हस्तक्षेप गर्दछन्। जब इन्द्रियहरू बाहिरी संसारमा बन्द हुन्छन्, तिनीहरू निद्राको बखत हुँदा, दिमाग यसको काममा कम बाधा हुन्छ। तर त्यसपछि निद्राले सामान्यतया इन्द्रियबाट दिमागलाई काट्छ र सामान्यतया इन्द्रियको सम्पर्कबाट बाहिर भएर के गरेको छ भन्ने कुराको ज्ञान ल्याउन दिमागलाई रोक्छ। जब दिमागले कुनै समस्या छोड्दैन, त्यो समस्या यसैले बोक्दछ यदि यसले निद्राको बेलामा इन्द्रिय छोड्छ, र यसको समाधान फिर्ता ल्याइन्छ र जाग्दा इन्द्रियसँग सम्बन्धित छ।
निद्रामा रहेको एउटाले समस्या समाधान गरिसकेको छ जुन ऊ ब्यूँझिएको अवस्थामा समाधान गर्न सक्दैन भनेको उसको दिमागले निद्रामा गरेको छ ऊ जागिरहेको बेलामा के गर्न असमर्थ थियो। यदि उसले उत्तरको सपना देख्यो भने, विषय, अवश्य पनि, कामुक वस्तुहरूको बारेमा हुनेछ। त्यो अवस्थामा, दिमागले समस्यालाई नत्यागेर सपनामा सोचेको प्रक्रियालाई सोचेको थियो जससँग यो जागृत हुँदा चिन्तित भएको थियो; तर्क प्रक्रिया केवल बाह्य जागरण इन्द्रियहरुबाट भित्री सपना देख्ने इन्द्रियहरूमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यदि विषय संवेदनशील वस्तुहरूको साथ सम्बन्धित छैन भने, उत्तर सपनाको रूपमा लिने छैन, यद्यपि निद्रामा उत्तर तुरुन्त आउन सक्छ। जहाँसम्म, समस्याहरूको जवाफ दिन सपना देख्न वा निद्रामा हुँदा यो आउँदैन।
समस्याहरूको उत्तर निद्राको बखत आउँछ जस्तो लाग्न सक्छ, तर उत्तरहरू क्षणहरूमा आउँदछन् जबकि दिमागले फेरि जाग्ने इन्द्रियहरूसँग सम्पर्क गर्दै छ, वा तुरुन्तै जाग्ने बित्तिकै। अमूर्त प्रकृतिको समस्याहरूको जवाफ सपना देख्न सकिदैन, किनकि इन्द्रियहरू सपनामा प्रयोग गरिन्छ र इन्द्रियहरूले हस्तक्षेप वा अमूर्त सोचाइलाई रोक्दछ। यदि निद्रामा र सपना नभएको दिमागले समस्या हल गर्दछ, र उत्तर थाहा हुन्छ मानिस ब्यूँझने बित्तिकै, तब दिमाग तुरुन्तै जागेको छ जस्तो देखिन्छ उत्तर यसमा पुगे पछि।
दिमाग निद्रामा आराम पाउँदैन, जहाँसम्म कुनै सपना वा मानसिक क्रियाकलापको सम्झना छैन। तर निद्रामा दिमागका क्रियाकलापहरू, र सपना नभएको बेला सामान्यतया जाग्ने अवस्थामा चिन्न सकिदैन, किनकि दिमाग र ब्यूँझने वा सपना देख्ने इन्द्रियको राज्यहरूमा कुनै पुल निर्माण गरिएको छैन; तर एकले यी गतिविधिहरूको परिणामलाई वेक स्टेटमा कार्य गर्न प्रेरणाको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। मानसिक र संवेदनशील राज्यहरूको बिचमा एउटा अस्थायी पुल एक जनाले गठन गर्छ जुन निद्रामा अड्किएर राखिएको छ जुन समस्यामा जागिरको बेला उसको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। जाग्ने बित्तिकै समस्याको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयासमा यदि उसले आफ्नो दिमाग पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गरेको छ भने, उसको प्रयास निद्रामा जारी रहनेछ, र निन्द्रा पूर्ण हुनेछ र ऊ जाग्यो र समाधानको लागि सचेत रहनेछ, यदि ऊ पुगेको थियो भने। निद्राको बखत